काजु खेति गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? काजु खेतिका लागि के कस्तो हावापानी र माटो चाहिन्छ त ?::Pathivara News
काजु खेति गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? काजु खेतिका लागि के कस्तो हावापानी र माटो चाहिन्छ त ?
यसको खेति गर्नका लागि उपयुक्त पर्ने हावापानी
यो उष्ण प्रदेशी क्षेत्रमा उपयुक्त हुने फलफुल जातको विरुवा हो । तुषारो पर्ने तथा धेरै ठण्डा हुने क्षेत्रमा यस्को खेति गरे त्यसबाट लाभ पाउन सकिदैन । समुन्द्र क्षेउछाउ को तटिय क्षेत्र र तेस्तै हावापानी पाइने स्तन साथै सापेक्षिक आद्रता भएको उष्ण हावापानी भएको समन्द्र क्षेत्रबाट सात सय मिटर उचाइ सम्म एक सालमा छ सय मि.मि. पानी पर्ने क्षेत्रमा यसको खेति गर्न सकिन्छ । काजुलाई हुर्कन र फल दिन गर्मि हावापानी धेरै सूर्यको प्रकाश अवाशेक हुन्छ। तसर्थ ठण्डा र बढी ओसिलो ठाँउमा खेति गरे यस बाट लाभ लिन सकिदैन।
काजुलाई २० डिग्री सेल्सियस देखि ४२ डिग्री सेल्सियस सम्मको तापक्रम सारै उपयुक्त हुन्छ। यस्तो तापक्रममा काजु खेति गरे खेतिबाट राम्रो लाभ लिन सकिन्छ। २० डिग्री सेल्सियस भन्दा तल र ४२ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रम भए यसको फल झर्ने समस्या आउछ। धेरै वर्ष र लामु समय सम्म घाम पाउन सकेन भने यसको उत्पादनमा असर पर्छ।
सुक्खा जमिन तथा अन्य बिरुवा हुर्कन नसक्ने जामिनमा पनि यसको खेति गर्न सकिन्छ। काजुका जराहरु लामा लामा हुन्छन। तसर्थ यसले टाढा टाढाका खाद्यतत्व संकलन गरि आफुलाई चाईने खाना पाउन सक्छ। माटो सधै चिसो भईरहने , हल्का पानी पर्दा पानी जम्ने, पानीको निकासी राम्रो सग नभएको ठाउँ मा यसको खति गरे लाभ हुदैन।
समग्रमा नेपालको तराई सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सुनसरीका समथर क्षेत्रहरु जहा सिंचाइको सुबिधा छैन्न तथा सामुदायिक वन क्षेत्रहरुमा काजु खेति गर्न सकियो भने नेपाली जनताहरु को आयआर्जन राम्रो वृधी हुने देखिन्छ।